pcb nhema nhema gungano - Shenzhen KAISHENG pcb CO., LTD
Pcb Kugadzira Uye Gungano - PCBFuture
Keyword: pcb nhema, pcb gungano zvinodiwa, Turnkey pcb gungano
Kunyangwe iwe uchida gungano rePCB, pcb yekunyepedzera, gungano rekutakura kana gungano rekutenga-rekutenga, PCBFuture ine izvo zvinodikanwa kubata rako rese chirongwa zvakanaka. Tiine makore anopfuura gumi neruzivo muPCB masevhisi, isu takadzidza kuti zvine musoro gungano mutengo, mhando yepamusoro sevhisi, kuendesa-nguva uye kutaurirana kwakanaka ndiwo makiyi anoita kuti vatengi vedu vafare uye nemabatiro atakaita bhizinesi redu.
Mari yakakosha mukushandisa inofanirwa kugadzirwa pamberi pezvinhu zvemagetsi zvisati zvaiswa zvinehunyanzvi uye kutenderedzwa pamabhodhi ako wedunhu akadhindwa senge automated stencil printa, tora uye isa nzvimbo michina, reflow ovens, otomatiki optical Inspection (AOI) michina, X-ray michina, inosarudza michina yekunamatira, maikorosikopu, uye zviteshi zvekunamatira.
Nekuti isu takazvipira kusangana neyako yekutungamira nguva uye zvemhando zvido isu tiri kugara tichiisa mari mune yazvino tekinoroji muSMT uye kuburikidza-kuburikidza-gomba michina.
Sei kusarudza isu pcb nhema uye Assembly:
1. Boka rinotyisa revanjiniya, mapurogiramu, vashandi veSMT, vadzidzisi veSoldering uye vaongorori veQC.
2. Nzvimbo yepamusorosoro neiyo yazvino SMT uye ne-kuburikidza-gomba michina yatinayo zviwanikwa zvakanakisa kusangana nezvako zvese zvePCB gungano zvinodiwa.
3. Tinogona kupa turnkey pcb sevhisi iyo ichapa akanakisa akadhindwa wedunhu mabhodhi emapurojekiti ako.
4. A state-of-the-art kutora & kuodha online system.
5. Isu tinoshanda mune diki nepakati kumhanya nekukurumidza kutungamira nguva.
6. inopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nemasevhisi ne - nguva yekuendesa pamitengo yemakwikwi kwazvo.
7. MaPCB edu ese ari UL uye ISO yakasimbiswa.
8. Ese edu Standard Specs PCBs akavakirwa IPC-A-6011/6012 yazvino yekudzokorora Kirasi 2 nekutarisa kunoenderana neIPC-A-600 Kirasi 2 yekudzokorodza kwazvino, kuwedzera kune mutengi yakatarwa zvinodiwa.
9. Ese Maitiro Anotsanangurwa Akadhindwa Eseketi Mabhodhi anoedzwa nemagetsi.
Tinogona kupa sevhisi:
Imwe FR4 mabhodhi
Yakatenderedzwa-maviri FR4 mabhodhi
Mhando yepamusoro tekinoroji ibofu uye yakavigwa kuburikidza nemapuranga
PcbFuture vane injiniya basa rutsigiro. Sezvo pcb & Pcb gungano mugadzirihaikwanise kuenderera mberi pasina mainjiniya rutsigiro. Yedu injiniya timu inoumbwa nevazhinji mainjiniya ezviitiko. Zvinenge zvese zvigadzirwa zvakakurumbira zvavari kuwana ruzivo rwekutsigira kugadzirwa. Kunze kwechiitiko chekugadzira, regedhi mainjiniya vese vari mukati mebasa ravo. Injiniya ivo vanogara vachipa rutsigiro rwakasimba kugungano rePCB.
Yakavimbika pcb Kugadzira & Gungano.Anopfuura makambani 2000 anoshanda pamwe nesu nekuti vanofunga kuti takavimbika. Zvino, mazhinji anouya seanotumirwa kubva kune vakagutsikana vatengi. Nekuda kwetekinoroji yazvino, zvinokwanisika kugadzirisa nekuita ako mapurojekiti mutengo-mushe uye ramangwana-chiratidzo. Iko kunetsekana kwevatengi kunogara kuri iko kutarisisa!